Cishe akekho umuntu uthenga izikhulumi ezihlakaniphe kakhulu i-Google - Thumela RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »Cishe akekho umuntu uthenga ezinye izikhulumi ezihlakaniphile ze-Google
Kwikota yesithathu, isabelo semakethe yakwaGoogle emakethe yezikhulumi ezihlakaniphile yehle ukusuka cishe kwengxenye yesithathu yemakethe kuya kwi-12% kuphela. Lesi ngesinye seziphetho zombiko wokugcina Canalys ekhishwe futhi inikeze umbono ophelele wemakethe yomhlaba ngesikhathi sekota, isikhathi lapho (ngaphandle kokusebenza kwe-Google) izigidi zabantu ziqhubeka nokuthenga izikhulumi ezintsha nezikrini ezihlakaniphile. Kusuka e-Amazon, ikakhulukazi, okukhuphule isabelo sayo semakethe cishe nge-70% ngokuqhathaniswa naleli phuzu le-2018.
Phakathi kwemiphumela, ngokusho kweCanalys, iholide eliqinile kulo nyaka, kanye nemikhankaso yezitolo ebuya esikoleni, isize i-Amazon ukuthi ithengise izikhulumi eziyizigidi ze-10,4 ngesikhathi sekota futhi iyaqhubeka nokusuka kude nepakethe.
Ngemuva kwe-Amazon, inkampani yase-China i-Alibaba ithengise okwanele ngesikhathi sekota (cishe i-4 million) ukuyibeka endaweni yesibili emhlabeni, ngenkathi brand yaseChina (Baidu) iya endaweni yesithathu ukuyoyeka i-Google okwesine. Kugrafu engezansi, ungabona futhi ukuthi i-Google ukuphela kwensiza enkulu yokubona ukwehla kokuthumela kusuka onyakeni kuya kolandelayo:
Umthombo wesithombe: Canalys
"Imvelo yezentengiso nokuhamba okunciphile kuye kwaphoqa u-Google ukuthi afune ukubambisana, njengeSpotify, ukushayela ukuthengisa eziteshini eziningi," kusho uJason Low, umhlaziyi ophakeme eCanalys, ngemininingwane. "Siphinde futhi sabona indlela efanayo yokubambisana eChina, lapho i-Alibaba inyuse khona isiteshi sayo kanye nobudlelwano bebhizinisi ukuze basebenzise ukusebenzisana kwesipikha nokukhulumisana nemikhiqizo enjenge-Starbucks.
Ngomuzwa ofanayo, isigaba se-Smart Screens sikhule kakhulu ngesikhathi sekota. , ngokusho kwedatha yeCanalys - ukuqopha ukwenyuka kwe-500% emhlabeni wonke ngenxa yokuthumela okuyisigidi se-6,3 phakathi kukaJulayi noSeptemba. U-Low ungeze, ikakhulukazi maqondana nale mikhiqizo, ukuthi "kwakubalulekile" ukugcina amanani entengo phansi uma izinkampani ezinjenge-Amazon zifuna ukuqhubeka nokunyusa ukuthengisa kwazo kwezikrini ezihle nokuncintisana okulukhuni kulindeleke ngaphambi kwesizini yeholide. ukuphela konyaka. Futhi, noma kunjalo, iGoogle ayisebenzi kahle, ithwala kuphela i-700 000 yokuhambisa isikrini ngesikhathi sekota.
Umthombo Wezithombe: Olly Curtis / future / Shutterstock
Lesi sihloko sivele kuqala https://bgr.com/2019/11/15/amazon-vs-google-smart-speaker-market-share-data-third-quarter/
I-Google Amamephu inikela ngesici esisha esisha esingathuthukisa kakhulu ukusebenza.